Fomba fampiasana endritsoratra hamakiana | Famoronana an-tserasera
Fomba fampiasana endritsoratra mba hovakiana
Jorge Neira | | loharanom-baovao, dia midika hoe
Avy amin'ny fomba fijery ny fanoratana fifaninanana tsy tapaka ao anatin'ny tontolon'ny mpanoratra maniry mafy ny hanana mpamaky marobe ary izany no ataon'ny mpanoratra ny tsy afaka hisarika ny mpamaky na inona na inona vidiny. Ka mandreraka kokoa ho an'ny mpanoratra izany mahazo mpamaky tsara ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy.
El atin'ny lahatsoratra Tsy isalasalana fa ny taova tena manan-danja indrindra, na izany aza, ny atiny tsara dia tsy antoka ho an'ny mpamaky matetika ao amin'ny bilaoginao ary amin'izany dia tsy maintsy fantatsika izany. inona ny antony izay mety hisarika mpamaky bebe kokoa amin'ny lahatsoratray.
1 Ny karazana typografika hisarihana ny mpanjifa
2 Inona no atao hoe typography?
Ny karazana typografika hisarihana ny mpanjifa
Ankehitriny dia misy ampahany lehibe amin'ny mpanoratra na mpamorona fa tsy manisy fiheverana izy ireo lafin-javatra isan-karazany fa amin'ny farany izy ireo dia misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fahita matetika amin'ny mpamaky ao amin'ny bilaogin'izy ireo, amin'ny fijerena diso ny lafiny toa ny atiny, angamba teboka sary sasany ao amin'ilay lahatsoratra na ilay teny mihitsy. Izany dia mahatonga ny manadino ny tena zava-dehibe ny mpanoratra na ny mpamorona hahazoana mamaky teny imasom-bahoaka ao anatin'ny sehatry ny famakiana bilaogy.
Araka izany, ity lahatsoratra ity dia hanolotra lafin-javatra sasany hodinihina, hanolotra amin'ity indray mitoraka ity ho typografia antony lehibe, izay mandrafitra ny endrika sy karazana litera ampiasainay amin'ny lahatsoratray.
Inona no atao hoe typography?
Typography afaka manisy fiovana eo amin'ny famakiana fa tsy. Ary eny, mety ho toa somary tafahoatra izy io, saingy ilaina ny mahafantatra ny fomba hijerena ireo fahafaha-mamaky ny mpamaky antsika. Ny mpanoratra na mpamorona sary Tsy maintsy mametraka ny tenanao eo amin'ny kiraron'ny mpamaky maro ianao, mba hahafantaranao izay mety ho fitakiana hatolotry ny mpamaky raha vakiany ny lahatsoratra eo. Araka izany, ny mpanoratra dia tokony handray ny andraikitry ny mpamaky vetivety, amin'ny fahatsapany fa vaovao vao hitany ilay lahatsoratra novakiany.
Ny typography dia mety ho zavatra mahafinaritra indrindra ny mety lehibe fa tsy maintsy ampanjifaintsika araka izay itiavantsika azy ary ny fombantsika manokana. Na izany aza, rehefa manandrana misy fiantraikany amin'ny besinimaro isika, matetika ny tsirontsika dia manilika, mametraka ny tsiro matetika an'ny vondrom-piarahamonina eo alohaloha, mamorona profil prototype amin'ny resaka safidim-bahoaka, dia ny solontena araka izay azo atao, mba hananana araka izay azo atao omeo fahafaham-po araka izay azo atao ny mpanatrika, amin'ity tranga ity, ho an'ny mpamaky.
Fa ny typografia mety hanimba ny asantsika, satria tsy maintsy dinihintsika izany ho an'ny mpamaky, ny kalitaon'ny asantsika dia manana hadisoana faran'izay fohy ho azy ireoNoho izany, ny antsipiriany momba ny firafitra na ny fahitana kely indrindra dia ampy hanidiana ny pejy ary hisafidy mpanoratra iray hafa ao amin'ilay faritra hamaranana. Mifanohitra amin'izany no zava-dehibe dia ny fandraisan'ny mpamaky a typography mahafinaritra tsara, saingy misoko mangina, tsy miovaova, nefa tsy dia henjana loatra, teboka afovoany manasaraka ny manintona, ny manintona ho an'ny fiarahamonina sy ny matihanina.
Ny mpanoratra na ny mpamorona dia tsy maintsy dinihina ihany koa ny haben'ny endritsoratraoEny, amin'ny maha-mpamorona antsika dia mila mieritreritra akory isika amin'ny fahafahan'ny mpamaky tsy mahafantatra ny fiasan'ny zoom amin'ny solosainy. Ilaina ny fanolorana lahatsoratra amin'ny mpamaky miaraka amin'izay mety hialana amin'ny tsy fahitana amin'ny endriny, hanomezana azy fampiononana sy fahaiza-miaina mora mifandraika amin'ny famakiana manontolo.
Araka izany, mila dinihina lafiny hita maso sy firafitra, izay tsy maintsy ataontsika raha tsy alohan'ny hamoahana lahatsoratra, satria ny atiny, na tsara toy inona aza, dia tsy hanome antoka antsika mpamaky maro ao amin'ny bilaoginay.
Typography, ary koa ny hafa singa hita maso izy ireo no ho fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitsidihana maro ary ny lisitr'ireo fitsidihana tsy azo antoka. Zava-dehibe indrindra ny fahalianan'ny mpanoratra na ny mpamorona ny fahazoam-bahoaka tsara raha isaky ny inona izy ireo no mandinika ny antsipiriany aseho eto. Te hitsidika ve ianao? Diniho ny typeface anao, ovao izy, ary mipetraha ary miandry ny valiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Fomba fampiasana endritsoratra mba hovakiana
Manitsy ny tsy fahatantesan'ny hoditra amin'ny Photoshop
Volavola ho an'ny mpanjifa sa endrika ho an'ny mpamorona?